Plezi Imwe: Chishandiso Chemahara Chekugadzira Inotungamira Neyako B2B Webhusaiti | Martech Zone
Mushure memwedzi yakawanda mukugadzira, Plezi, SaaS yekushambadzira otomatiki software inopa, iri kutangisa chigadzirwa chayo chitsva muruzhinji beta, Plezi One. Ichi chemahara uye intuitive chishandiso chinobatsira madiki uye epakati-saizi makambani eB2B kushandura webhusaiti yavo yekambani kuita saiti inotungamira yechizvarwa. Tsvaga kuti inoshanda sei pazasi.
Nhasi, 69% yemakambani ane webhusaiti ari kuyedza kuvandudza kuoneka kwavo kuburikidza nematanho akasiyana akadai sekushambadzira kana masocial network. Zvakadaro, makumi matanhatu kubva muzana vavo havana chiono chehuwandu hwemari yavo inowanikwa kuburikidza newebhu.
Takatarisana nekuoma kwese akasiyana nzira dzekushambadzira dzedhijitari, mamaneja anoda zvinhu zviviri zviri nyore: kunzwisisa zviri kuitika pawebhusaiti yavo uye kugadzira inotungamira pawebhu.
Mushure memakore mashanu ekutsigira makambani anodarika mazana mana neayo ese-in-one kushambadzira otomatiki software, Plezi anoda kuenderera mberi nekuburitsa Plezi One. Chinangwa chikuru cheiyi software yemahara ndechekushandura chero webhusaiti kuita jenareta inotungamira, kuitira kutsigira nhamba huru yemabhizinesi kubva panguva yavanotanga.
Chishandiso Chiri Nyore Chekushandura Webhusaiti Yako Kuita Jenareta Inotungamira
Plezi One inofambisa kugadzirwa kwevanotungamira vanotungamira nekuwedzera zvisina musono mafomu ane otomatiki meseji kunzvimbo dzemakambani. Inokubvumirawo kuti unzwisise zviri kuitwa nemutungamiri wega wega pasaiti, uye kuti anochinja sei vhiki nevhiki nemadhibhodhi akachena.
Ichi chimwe chinhu chekufunga nezvako kana uri kutanga rwendo rwako rwedhijitari uye uchiri kutsvaga mhinduro yakanakisa yechizvarwa chinotungamira uye kutevedza webhu zvakasanganiswa. Kubatsira kukuru kwe Plezi One ndezvekuti haufanire kuve neruzivo rwehunyanzvi kuti uishandise kana kutanga kushambadzira kwako. Hezvino mashandiro ayo.
Tanga yako lead generation strategy
Mafomu ndiyo nzira iri nyore uye yakatwasuka yekushandura muenzi asingazivikanwe kuti ave mutungamiri ane hunyanzvi pawebhusaiti. Uye kune mikana yakawanda yekuita kuti muenzi azadze fomu, ringave rekubatana, kukumbira mutengo, kana kuwana bepa jena, tsamba yenhau kana webinar.
On Plezi One, kusikwa kwefomu kunoitwa nekukurumidza iwe paunowedzera chinhu chitsva. Plezi inopa matemplate akasiyana, aine mibvunzo yakachinjirwa kumhando dzakasiyana dzemafomu kuti aenderane nematanho ekutenga kutenderera (uye ita shuwa kuti hautadze muenzi anongoda kusaina tsamba yako nemibvunzo).
Kana iwe uchida kugadzira yako yega fomu template, unogona kuzviita kuburikidza nemupepeti uye sarudza minda yaunoda kushandisa. Iwe unogona kugadzirisa mafomu kuti aenderane nedhizaini yako webhusaiti. Iwe unogona zvakare kugadzirisa meseji yako yemvumo yeGDPR. Kana uchinge wagadzira matemplate, unogona kuwedzera kune yako saiti nekudzvanya kumwe!
Iwe unogona zvakare kugadzira maemail ekutevera anotumirwa otomatiki kune vanhu vakazadza fomu, kungave kuvatumira sosi yakakumbirwa kana kuvavimbisa kuti chikumbiro chavo chekubata chabatwa. Uchishandisa smart fields, unogona kutogadzirisa maemail aya nezita rekutanga remunhu kana sosi yakangoiswa otomatiki.
Nzwisisa Maitiro evateereri uye Vanokodzera Inotungamira
Iye zvino vashanyi vako zvavave kutanga kuzadza mafomu ako, iwe unowedzera sei ruzivo rwavo? Apa ndipo panouya Plezi One's Contacts tab, kwaunowana vanhu vese vakakupa ruzivo rwavo. Kune yega yega yekubata, iwe unowana zvinhu zvakati wandei zvinokubatsira iwe kugadzirisa maitiro ako.:
Chiitiko chemuenzi uye nhoroondo inosanganisira:
Mapeji anoonekwa pasaiti yako
Iyo chiteshi yavaunza kune yako saiti.
Tsanangudzo yetarisiro. yakagadziridzwa nekukurumidza kana iyo yekubata ichipa ruzivo rutsva nekudyidzana nezvimwe zvirimo:
Kutanga uye zita rekupedzisira
Iyi tebhu inogona zvakare kushandiswa semini mutengi hukama manejimendi chikuva (CRM) kana usati wava nayo. Chikwata chako chekutengesa chinogona kuwedzera manotsi pane rekodhi rega rega kuti uchengetedze kushanduka kwehukama netarisiro yako.
Unogona kutarisa kusangana kwevateereri vako pawebhusaiti yako, sezvo kudyidzana uku kuchirekodhwa. Iwe unozove neruzivo rwuri nani rweizvo vateereri vako vari kutsvaga uye kuti ndezvipi zvemukati zvavangafarira.
Iyo yekutevera script inokuratidza kuti tarisiro yako iri kubva kupi, zvavari kuita pawebhusaiti yako uye kana vadzoka. Ichi chinhu chinobatsira nekuti chinokupa kunzwisisa usati watanga kukurukura navo. Analytics inogona kukubatsira kutevedzera uye kunzwisisa tarisiro yako.
Ongorora Kuita kweChirongwa Chako
Chikamu cheReport chinokutendera kuti uone huwandu hwezviito zvako zvekushambadzira nekungotarisa. Plezi asarudza kutarisisa pane iyo data yakakosha kuti unzwisise mashandiro esaiti yako uye yako yekushambadzira zano, pane kugara pane anovhiringa uye anoraswa metrics. Inzira yakanaka yekuti maneja kana mutengesi awane kubata nekushambadzira kwedhijitari!
Pano iwe unogona kuona zvese zviri kuitika pane yako saiti kwenguva yakatarwa, nehuwandu hwevashanyi uye kushambadzira inotungamira, pamwe ne girafu yekutendeuka kwako funnel kuti uone kuti vangani vatengi kushambadzira kwako kwakaunza kwauri. A search engine optimization (SEO) chikamu chinokutendera kuti uone kuti mangani mazwi akakosha awakamiswa uye paumire.
Sezvaunogona kuona, Plezi One inopesana nezviyo zvekunyanya kuomarara (uye kazhinji zvisingashandiswe) mhinduro nekupa ruzivo rwemvura kune chishandiso chiri pamwoyo wekambani yekushambadzira zano.
Inopa intuitive chiitiko kubvumira makambani asati ave nechikwata chakazvipira kuti atange kunzwisisa nzungu uye mabhaudhi ekushambadzira kwedhijitari uye otanga kugadzira inotungamira kuburikidza newebhusaiti yavo. Zviri nyore kuseta, nyore kushandisa uye 100% yemahara! Kuda kuwana mukana wekukurumidza kuPlezi One?
Sign up for Plezi One for FREE pano!
Tags: b2bb2b kutungamira chizvarwaCRMkugadzira fomufomu matemplatefomu chishandisolead kubatwatungamira genmutungamiri wechizvarwakutungamira chinzvimbopleziplezi imwevanokodzera kutungamiramushanyi chiitiko